မောင်မိုး: ဖက်ဒရယ်စနစ် အပိုင်း (၂) ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း
“အမျိုးဘာသာ သာသနာကိုကာကွယ်ကြလော ခေတ်မှီ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်ကိုထူထောင်ကြလော”
ဖက်ဒရယ်စနစ် အပိုင်း (၂) ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း
မြန်မာနိုင်ငံကိုကြည့်ရင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ဖေါ်ထုတ်သွားတဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ဥပဒေသာ ပြည်သူနဲ့ တိုင်းပြည် အတွက် ဦးစားပေးတဲ့ ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ ဥပဒေလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ၁၉၇၄ နဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ ဥပဒေတို့ဟာ တိုင်းပြည်အကျိူးထက် စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးကို တရားဝင်မှုရှိအောင် ကြိုးစားခြင်းက အဓိက ပိုကျပါတယ်။
၁၉၇၄ နဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ် ပုံဥပဒေ တွေဟာ ပုံသဏ္ဍာန်အနေနဲ့ တည်ဆောက်မှု (Form and Structure)
ရှိပေမဲ့ အနှစ် သာရ (Essence) အပိုင်းမှာ လစ်ဟင်းနေတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသာရှိပေမယ့် (အသက်) မရှိတဲ့
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံဥပဒေ ရေးဆွဲရေးဆွဲရာမှ လွတ်လပ်ရေး ရှေ့ပြေးဖြစ် နေတာကြောင့် ဖုတ်ပူမီးတိုက် ဖေါ်ထုတ်ခဲ့ကြရတယ်။ ကံကောင်းခြင်တော့ ဗိုလ်ချုပ်တို့ခေတ်က ဖဆပလ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ အသိစွမ်းအားမြင့်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တာကြောင့် လွတ်လပ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံဥပဒေကို အချိန်မြန်မြန်နဲ့ ရေးဆွဲနိုင်ခဲ့ကြတယ်။
တကယ်တော့ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံဥပဒေဟာ ဟိုက ကောင်းနိုးရာရာ ဒီကကောင်းနိုးရာရာ တွေကို
ဖြတ်၊ ညှပ်၊ ကပ် ကြပြီး လွပ်လပ်ရေးအချိန်မှီ ပြုစုခဲ့ကြရရှာတာပါ။ သို့သော် အသေအချာ ပြန်စဉ်းစားရင် ဖေါ်ထုတ် ပြီးခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ ဥပဒေတွေအထဲမှာ အကောင်းဆုံးလို့ ငြင်းချက်ထုတ်လို့ ရတယ်။ ပုံသဏ္ဍာန် အပြင်
ဥပဒေပြုစုရေး ကော်မီတီတွေ ဆပ်ကော်မီတီတွေရှိပေမယ့် တကယ့်အနှစ်ကိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အတူ သခင်မြ ၊ သခင်နု ၊ ဦးကျော်ငြိမ်းတို့လို ဖဆပလ ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်ကပဲ ဦးဆောင်သွားကြတာပဲ။
ဗိုလ်ချုပ်တို့ အလုပ်ကြခံရတော့ ဦးကျော်ငြိမ်းက ဦးနုနဲ့ အတူ အင်္ဂလန် ဆွေးနွေးပွဲကအပြန် ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ စေခိုင်းချက်
အရ ယူဂိုစလပ် ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံကို သွားလေ့လာ နေရတာကြောင့် ဥရောပ ရောက်နေတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်တို့ဟာ ဘုရင်စံနစ်ကို ပြန်ဖေါ်ထုတ်ရင် တည်ငြိမ်မှု ရမလားဆိုပြီးလည်း မင်းလောင်းပြန်ရှာဖို့တောင် စိတ်ကူးခဲ့ကြသေး
တယ်။ အဘက်ဘက်ကို လေ့လာပြီးမှ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီ စံနစ်ကို ရွေးခဲ့ကြတာပါ။
အုပ်ချုပ်ရေးကို စဉ်းစားတဲ့အခါ အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ သမ္မတနဲ
၁၉၇၄ နဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံဥပဒေတို့ဟာ တိုင်းပြည်အကျိူးထက် စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးကို တရားဝင်မှုရှိအောင် ကြိုးစားခြင်းက အဓိက ပိုကျပါတယ်။
့ ဖက်ဒရယ်စံနစ်ကို ရွေးမလား၊ အများအုပ်ချုပ်မှု (majority
rule) လို့ခေါ်တဲ့ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို ရွေးမလားဆို
တဲ့ ပဓာနကျတဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေကို (နိုင်ငံရေးသမား) တွေ
က ဆုံးဖြတ်ကြပြီး ဥပဒေဘောင်ဝင်အောင် ဥပဒေသမား ဦးချန်ထွန်းကို တာဝန်ပေးခဲ့ကြတာပဲ။ ဒီနေရာမှာ နေရူးရဲ့ ဥပဒေ ပညာရှင်က ဦးချန်ထွန်းကို အများကြီး အကူအညီပေးခဲ့တယ်။ အချောပြင်ပြီးသားကို သခင်မြက ဘာသာပြန်
အရေးကြီးတဲ့အချက်က နိုင်ငံရေးသမားတွေကပဲ အဓိကကျတဲ့ ဘယ်စံနစ်ကို ရွေးချယ်ရမလဲ ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်
ကို ချသင့်တယ်လို့ စာရေးသူ ကခံယူမိတယ်။ အကြောင်းက နိုင်ငံရေးသမားစစ်ရင် လူအများရဲ့ ထောက်ခံမှုဟာ
နိုင်ငံရေးရဲ့ (အနှစ်သာရ) ဆိုတာ သိတာကြောင့် နိုင်ငံ့အကျိုးကို ဦးစားပေး စဉ်းစားတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်တို့ကိုပဲ ကြည့်ကြည့်၊ အက်လက် ဆန်ဒါးဟယ်မတင်တို့လို အမေရိကန် ခေါင်းဆောင် တွေကိုပဲကြည့်ကြည့် တိုင်းပြည်ရဲ့ အကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီး စဉ်းစားကြတယ်။ ရေရှည် အကျိုးအတွက် နက်နက်တွေးကြတယ်။ တိန်လျောက်ပိန်
လို ကွန်မြူနစ်တောင် နိုင်ငံရေးသမား စစ်တာကြောင့် တိုင်းပြည်အကျိုးကို အဓိက ထားခဲ့တာပဲ။
နောက် အရေးကြီးတဲ့အချက်က မြန်မာတွေရဲ့အမြင် တခုတည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး။ တိုင်းရင်သားတွေရဲ့ အမြင် လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။ အမေရိကားမှာတုန်းက လူမျိုးကိုအခြေခံတဲ့ ပြည်နယ်တွေ မဟုတ်တဲ့ အတွက် ပြည်နယ်ကြီး / ပြည်နယ်ငယ် အရေးကိစ္စပေါ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် အပေးအယူ လုပ်ကြရာမှာ ညီမျှအောင်
ပြည်နယ်အကြီးလည်း Senator (၂) ယောက်၊ ပြည်နယ်ငယ်လည်း Senator (၂) ယောက် ရွေးချယ်ခွင့် ရှိရမယ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့အပြင် အရေးကြီးတဲ့ ရာထူးခန့်ရာမှာ သမ္မတရဲ့ အဆိုပြုမှုကို Senateက သဘောတူမှ တရားဝင်တယ်။
အထူးသဖြင့် အမြင့်ဆုံး တရားရုံးချုပ် (Supreme Court) တရားသူကြီးတွေကို ရွေးချယ်ရာမှာ Senate ရဲ့ သဘောတူညီမှုဟာ အလွန်အရေးပါတယ်။ တခါ သမ္မတကို ရာထူးကဖယ်ရှားဖို့ အစီအစဉ်မှာ အောက်လွှတ်တော်
က တရားလိုအဖြစ် စွဲချက်တင်ရပြီး Senateက ဂျူရီလူကြီးအဖြစ် အဆုံးအဖြတ်ပေးရတာ။ Senate ကို ဦးစားပေးတဲ့ စီမံချက်တွေကို ထည့်သွင်းထားပြီး ပြည်နယ်ကြီး၊ ပြည်နယ်ငယ် ပဋိပက္ခကို ဖြေရှင်းခဲ့ကြရတာ။ အောက်လွှတ်တော်
က (လူဦးရေ) ကို ကိုယ်စားပြုတာ။ အထက်လွှတ်တော် Senate က (ပြည်နယ်) ကို ကိုယ်စားပြုတာ။
ဗိုလ်ချုပ်တို့ဟာ ဘာကြောင့်များ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို ရွေးခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို စာရေးသူ သိပ်သိချင်တယ်။ အသိစွမ်းအား တိုးတက်ပြည့်စုံလာတဲ့ အရွယ်ရောက်တော့ မေးရမယ့်ဖခင်ကြီးက မရှိတော့ဘူး။ စာရေးသူဟာ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီစံနစ် (Majority Rule) ကို မနှစ်သက်ဘူး။ အဓိက အကြောင်းတရပ်က အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ ဥပဒေပြုစုရေးကို အနိုင်ရပါတီကပဲ ထိန်းချုပ်ထားတာကို ဘဝင် မကျဘူး။
အမတ်အများဆုံးရတဲ့ ပါတီကပဲ ဝန်ကြီးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့။ ဒီအမတ် ဒီပါတီကပဲ တခါ လွှတ်တော်မှာ ဥပဒေပြုကြဆိုတော့ ဒီလူတွေပဲ ဥပဒေလုပ်၊ ဒီလူတွေပဲ ဒီဥပဒေနဲ့ ပြန်အုပ်ချုပ် ဝန်ကြီးလုပ်ကြဆိုတော့ တဘက်သတ် ဆန်လွန်းတယ်။
နောက်တချက်က ဥပဒေလုပ်တာနဲ့ အုပ်ချုပ်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်း (skill sets) ချင်း မတူကြဘူး။ ဥပဒေ
ပြုသူက အပေးအယူ ( Art of Compromise) ကျွမ်းရမယ်။ ဝန်ကြီးလုပ် အုပ်ချုပ်သူက အမိန့်ပေး ခိုင်းတတ်ရမယ်။
ပေါ်လစီကို နားလည်ရမယ်။ နောက်တချက်က စာရေးသူ အမြင်မှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ အများအားဖြင့် (အုပ်ချုပ်ရေး) မှာ (အားနည်း) တယ်။ (အသေးစိပ်)ကို မနိုင်ကြ။ စ်ိတ်မဝင်စားကြ။ အုပ်ချုပ်ရေးတော်တဲ့ နိုင်ငံရေး သမားတွေ ရှိကြပါတယ်။ သို့သော် (ရှား) တယ်။
တရုတ်နဲ့ အမေရိကန်ပုံစံတွေကိုကြည့်ရင် ဝန်ကြီးတွေဟာ မိမိ ဘာသာရပ်နဲ့အတူ ဆိုင်ရာပေါ်လစီ တွေကို ကျွမ်းတဲ့ ပညာရှင် (technocrat) တွေများတယ်။ တခါတရံ နိုင်ငံရေးသမားတွေပါပေမယ့် လူနည်းစုပဲ။ ဒါကြောင့် ပေါ်လစီ ချရာမှာရော၊ ဖေါ်ဆောင်ရာမှာပါ နိုင်ငံရေးသမား ဝန်ကြီးတွေထက် ထိရောက်မှု ရှိတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။
နောက်တချက်က ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစံနစ်မှာ အုပ်ချုပ်မှုသက်တမ်း ကန့်သတ်ချက် မရှိဘူး။
ဥပမာ ဂျပန်မှာ အဲလ်ဒီပီ (လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်) တွေဟာ
နိုင်ငံရေးသမားစစ်ရင် လူအများရဲ့ ထောက်ခံမှု ဟာ နိုင်ငံရေးရဲ့ (အနှစ်သာရ) ဆိုတာ သိတာ
ကြောင့် နိုင်ငံ့အကျိုးကို ဦးစားပေး စဉ်းစားတယ်
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးကတည်းက အုပ်ချုပ် လိုက်ကြ
တာ အုပ်စုအချင်းချင်း ပြိုင်ဆိုင်မှုပဲရှိပြီး ပဒေသရာဒ်ခေတ်
က ရွာစား နယ်စားတွေလို နယ်ပယ် အပိုင်စားတွေ ဖြစ်လာ ကြတာကြောင့် နောက်ဆုံး ဗြူရိုကရက်တွေကပဲ အာဏာ ကြီးထွားလာကြတဲ့ ဘဝကိုရောက်ရတယ်။ အုပ်စုချင်းပြိုင် အစိုးရခဏခဏပြောင်း၊ ခိုင်မြဲတာက ဗြူရိုကရက်တွေ
ပဲကိုး။ အတိုက်ခံတွေမှာ ခုမှအာဏာရကြတာ။
အီတလီကတော့ အစိုးရ ခဏခဏပြောင်းသလို ပါတီတွေလည်း ပြောင်းဆိုတော့ ဘာမှ အလုပ် မဖြစ်မြောက်တော့
ဘူး။ ကြီးထွားလာတာက မာဖီယားပဲ။ အယုံ အကြည်မရှိ အဆိုကို သုံးပြီး မဲခွဲပြီး အစိုးရကို ဖြုတ်ချနိုင်တာကြောင့် အစိုးရ မတည်ငြိမ်မှု ရှိနိုင်သလို သက်တမ်းကန့်သတ်ချက် မရှိတာကြောင့် ဂျပန်လို တပါတီ အုပ်ချုပ်ရေး ဖြစ်နိုင်
တယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရသက်တမ်း ကန့်သတ်ချက်ဟာ ရှိသင့်တယ်လို့ မြင်မိတယ်။
အရေးအကြီးဆုံး တချက်ကတော့ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစံနစ်မှာ အမတ်ဆိုတာက ရပ်ကွက်နယ်မြေကို ကိုယ်စားပြုရတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်။ ရပ်ကွက်ကို ခွဲရာမှာ လူဦးရေအလိုက် ခွဲတာများတယ်။ ဒါကြောင့် အမေရိကားမှာ ပြည်နယ်ကြီးတွေက လူဦးရေများတော့ ကိုယ်စားလှယ် ဦးရေများတယ်။ ပြည်နယ်သေး တွေက ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ နည်းနည်းပဲရကြတယ်။
အရင်းစစ်လိုက်ရင် ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာ (လူဦးရေ) အပေါ် မူတည်တာပဲ။ ဒါဆို ဗမာ တွေက လူဦးရေ များတာကြောင့် အမြဲအသာစီး ရနေတော့မှာပေါ့။ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီစံနစ်မှာ အောက်လွှတ်တော်က အဓိက မကျဘူးလား။ သူ့မှာ နိုင်မှအစိုးရ ဖွဲ့ရ မှာလေ။ ဒါဆို တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် တရားပါ့မလား။ လူမျိုးစုလွှတ်တော် ဆိုတာရှိပေမယ့် အောက်လွှတ်တော်လောက် မထိရောက်။ ဒါကြောင့် ၁၉၄၇ ခု ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ဌာနတွေတည်ထောင် ထားရတာ။ ဒါ့အပြင် သမ္မတရာထူးကို တိုင်းရင်းသားတွေကို ကိုယ်စားပြုရအောင် အလှည့်ကျ ရွေးချယ်စေတာ။
ပြောမဲ့သာပြောတာ (ဦးနုတို့ခေတ်)က လုပ်မှားကိုင်မှားတွေကြားက တိုင်းရင်းသားတွေဟာ (စစ်တပ်ခေတ်)နဲ့ စာရင် အများကြီး နေရာရကြပါတယ်။ ဖဆပလထဲမှာ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ နေရာရကြသလို အမတ်ဆိုတာက လည်း တကယ် (မဲ) ပေးနိုင်တဲ့ အမတ်မင်းမို့ အတိုင်းအတာ တခုအထိတော့ သြဇာရှိတာပါပဲ။ ဦးနု သက်တမ်း တလျောက် (နောက်ပိုင်း) စဝ်ခွန်ချိုဟာ ဒုဝန်ကြီးချုပ် (နိုင်ငံခြားရေး) ဌာနကို ကိုင်လာတာ မဟုတ်ဘူလား။
ကျေနပ်စရာ အဆင့် ရှိပြီလား။ မရှိသေးဘူး။ သို့သော် နောက်ပိုင်း ခေတ်တွေနဲ့ယှဉ်ရင် အများကြီးသာပါတယ်။
စကားစပ်မိလို့ ပြောရရင် တိုင်းရင်းသား ပညာတတ်တွေ အထဲမှာ စာရေးသူ အလေးစားဆုံးဟာ သမ္မတကြီး စဝ်ရွှေသိုက်ရဲ့သား ဒေါက်တာ ယူဂျင်းသိုက်ပဲ။ ဦးယူဂျင်းဟာ သေနတ်လည်း ကိုင်တိုက်ဖူးတယ်၊ ပါတီလည်း
ထောင်ဖူးတယ်၊ ပါရဂူဘွဲ့ရ ပညာတတ်အပြင်၊ နက်နက်တွေးပြီး အရှည်ကိုကြည့်နိုင်တဲ့ လူတော် တယောက်ပဲ။
ကျနော် အလေးစားဆုံးက လူကြီးလုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရေအချင်း တခုဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်လို tempe-rament လို့ခေါ်
တဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ စိတ်ထားရှိတယ်။ ဒေါက်တာ စတိုင်းဖတ် ဦးစီးကျင်းပတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ လူငယ်ခေါင်းဆောင်လေး
တွေက စိတ်လိုက်မာန်ပါ ဝေဖန်ငြင်းဆိုလာတော့လည်း ခေါင်းအေးအေးနဲ့ ပြန်လည်ရှင်းပြ ဆွေးနွေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။
ဒါ အီးအိုင်ကရူ (EIQ) မြင့်တာကိုပြတာပဲ။ အသိစွမ်အား မြင့်တယ်၊ ချင့်ချိန်နိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိတယ်၊ မျှတတဲ့စိတ်ဓါတ် ရှိတယ်ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားပြဿနာလို သိမ်မွေ့ ခက်ခဲရုံမက စိတ်ခံစားမှု (emotion) ပါ ပါဝင်ရှုပ်ပါထွေးလာတတ်
တဲ့ ကိစ္စတွေကို ကိုင်တွယ် အဖြေရှာတဲ့အခါ အလွန်အကျိုးရှိ ထိရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဦးယူဂျင်းလို လူတော်ခေါင်းဆောင်တွေ နှစ်ဘက်စလုံးမှာ လိုအပ်လှပါတယ်။
မျိုးဆက်သစ် လူငယ် တိုင်းရင်သားတွေအထဲမှာ ဒီလိုအဆင့်မြင့် လူငယ်လေးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အော့ဖေါ့က် (Oxford) မှာ သင်တန်းတက်ခဲ့ပြီး အဲလ်အဲလ်အမ် (LLM) ရပြီး အခု အဲလ်အဲလ်ဒီ (LLD) ဆက်တက်နေတဲ့
နော်မေဦး တို့လို ကရင် လူငယ်လူတော်တွေရှိပါတယ်။ ENC မှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ Dr Lian H. Sakhong ဟာလည်း ပညာတတ် လူတော်တယောက်ပါပဲ။ ဗမာတွေ အထဲမှာတော့ နယ်စပ် အခြေစိုက် ဗမာ့ရှေ့နေကောင်စီ (BLC) က လူတွေပဲ ဖက်ဒရယ် စံနစ်ကို ဆွေးနွေးနိုင်ကြတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ခေတ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင် မတူညီတဲ့ စံနစ်တွေကို အသေအချာ လေ့လာပြီးမှ မြန်မာပြည် အတွက် ကောင်းမယ့် (အနှစ်) တွေကို ယူကြပြီး (ပုံ) ဖေါ်ပြီးမှ ကဲ ဦးချန်ထွန်း ဥပဒေဘောင် ဝင်အောင် ဥပဒေ
စကားနဲ့ သွားရေးဆိုပြီး စေခိုင်းတာပဲ။ အခြခံဥပဒေ ရေးဆွဲကာနီးမှ ဟိုစာအုပ်ပေးပါဦး ဒီဟာဖတ်ကြပါဦးဆိုပြီး ကမူးရှုးထိုး ရေးခဲ့ကြတာလည်း မဟုတ်။ ကျောင်းသားဘဝ နိုင်ငံရေးသမားပေါက်စ ဘဝကတည်းက (အသိစွမ်းအား) (capacity) မြင့်အောင် လေ့လာခဲ့ကြရတာ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆီက အတုယူစေချင်တာက နိုင်ငံရေးမှာ အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘယ်အချိန် ဘယ်လိုပေါ်လာမယ် မပြောနိုင်ဘူး။ လိုအပ်ချက်ကိုသိပြီး လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ထားဖို့က ကိုယ့်အလုပ်ပဲ။ အထူးသဖြင့် မြန်မာလူငယ် လူရွယ်တွေကို ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေအကြောင်းနဲ့ ဖက်ဒရယ်စံနစ် အကြောင်းကို လေ့လာပြီး မိမိတို့ရဲ့ အသိစွမ်းအား (capacity) ကို အားဖြည့်ထားစေချင်တာ စာရေးသူရဲ့ စေတနာပါ။ (အသိ) မြင့်မှ (တရားမျှတမှု) ကို နားလည်
နိုင်သလို (အရှည်)ကို ကြည့်နိုင်ပါမယ်။
ဖက်ဒရယ်စံနစ် မှာကောင်းတာတွေ အများကြီးရှိသလို အန္တရယ် ဖြစ်နိုင်တာတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဖက်ဒရယ် (ဗဟို) အစိုးရနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရတွေကြားမှာ အာဏာခွဲခြားမှု၊ အင်္ဂလိပ်လို Federal and State Rights လို့ခေါ်တဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ခွဲခြားမှုတွေကို တိတိလင်းလင်း ဖေါ်ပြမှုမရှိရင် ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရှိခဲ့ရင်တောင် အငြင်းပွားမှု တွေရှိပါတယ်။
နောက်တခါ ပြည်နယ်အချင်းချင်း အငြင်းပွားရင် ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်း (Mechanism) တွေရှိရမယ်။ နောက်မို့ဆိုရင် အငြင်းပွားနေကြတာနဲ့ ဘာအလုပ်မှလုပ်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ တိုင်းပြည်ထူထောင်ချင် တဲ့စိတ်က စောနေတာကြောင့် အုပ်ချုပ်ရေးဖြောင့်ဖြောင့် လုပ်နိုင်အောင် (Governance) အတွက် ဖက်ဒရယ်စံနစ် အစား ယူနီတာလီ (Unitary) စံနစ်ကို ရွေးခဲ့ကြရတယ်လို့ စာရေးသူ နားလည်ထားပါတယ်။
နောက်တချက် က ဖွံ့ဖြိုးမှု မညီမျှတာတွေရှိတယ်။ အောင်ဆန်း၊အက်တလီစာချုပ် အပိုဒ် ဂ၊ အပိုဒ်ခွဲ (ဃ)အရ ပင်လုံစာချုပ်၊ ချုပ်ဆိုအပြီးမှာ ရီး(စ်)ဝီလျံ ဦးဆောင်တဲ့ တောင်တန်းဒေသ စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့ပေးခဲ့ပြီး အဖွဲ့ရဲ့ အစီအရင်ခံစာမှာ တချို့တောင်တန်းနေ ဒေသခံတွေဟာ ဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ်တဲ့နည်းနဲ့ အကျွမ်းတဝင် မရှိသေးတဲ့ အတွက်နဲ့ အချိန်အမရတော့တာမို့ ဒေသအလိုက် သင့်လျော်သော နည်းကိုသာသုံး ရွေးချယ်ရန်သာ ထောက်ခံခဲ့ ပါတယ်။
ဖက်ဒရယ် စကားလုံးကို အဓိပ္ပပါယ် မပေါက်ဘဲ၊ စုံစမ်းရေး အဖွဲ့နဲ့ ဆွေးနွေးကြရာမှာ အလွဲလွဲ အချော်ချော် ဖြစ်ခဲ့ကြ
ရပါတယ်။ (အသိ) တိုးတက်မှု မညီမျှမှုကို စောင့်ပြီးခေါ်ဆောင်ဖို့ အချိန်မရတာလည်း ပါနိုင်တယ်လို့ စာရေးသူ အမြင် ရှိပါတယ်။ (မှတ်ချက်။ သမိုင်း ပါမောက္ခ ဦးထွန်းအောင်ချိန် ထုတ်ဝေသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးနှင့် ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေ (ပထမတွဲ) စာမျက်နှာ ၃၃၆ ကိုညွန်းပါသည်။)
အမေရိကားမှာတောင် ဖက်ဒရယ်နဲ့ ပြည်နယ်ပြဿနာဟာ ဒီနေ့အထိ ရှင်သန်လျက်ပဲ။ အိုဘားမားကဲ (Obamacare) လို့ အမည်တပ်ကြတဲ့ ကျန်းမာရေး ဥပဒေဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေအရ တာရားမဝင်ဘူးဆိုပြီး ပြည်နယ် (၂၆) ခုက တရားစွဲထားကြတယ်။ ဖက်ဒရယ် အစိုးရက ဗိုလ်မကျ နိုင်အောင်ပါ။
မကြာမှီကမှ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အစိုးရသစ်မှာလည်း ဗဟို၊ပြည်နယ် ပြဿနာကို စတင်ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။ ဒါကြောင့် နားကြားကောင်းအောင် ဒီမိုကရေစီကွ၊ ဖက်ဒရယ်ကွလို့ လွယ်လွယ်ပြောလို့ မရပါ။ နက်နက်တွေးကြည့်မှ အတွင်းပြဿနာတွေ အများကြီးရှိတာကို သိနိုင်ပါတယ်။ အစကောင်းမှ အနှောင်းသေချာ ဆိုသလို တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဗမာတွေအကြား ဗမာစစ်တပ်ရဲ့ အမှားတွေကြောင့် အဖုအထစ်တွေဟာ ကြီးထွားလာခဲ့ကြရတယ်။
အရင်းစစ်လိုက်ရင် ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာ (လူဦးရေ) အပေါ် မူတည်တာပဲ။ ဒါဆို ဗမာ တွေက လူဦးရေ များတာကြောင့် အမြဲအသာစီး ရနေတော့မှာပေါ့။ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီစံနစ်မှာ အောက်လွှတ်တော်က အဓိက မကျဘူးလား။ သူ့မှာ နိုင်မှအစိုးရ ဖွဲ့ရ မှာလေ။ ဒါဆို တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် တရားပါ့မလား။ လူမျိုးစုလွှတ်တော် ဆိုတာ ရှိပေမယ့် အောက်လွှတ်တော်လောက် မထိရောက်။
တိုင်းရင်သားပြဿနာကို ဖြေရှင်းတဲ့အခါ (မျှတ) ဖို့အပြင် (စံနစ်ကျ) ဖို့လည်း လိုပါလိမ့်မယ်။ စစ်တပ် ထဲမှာလည်း မျှတချင်တဲ့ တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့ လူငယ်လူကြီး တွေရှိမှာပါ။ မဆလ သမ္မတဟာင်း ဒေါက်တာ မောင်မောင်ဟာ ဂျပန်ခေတ်ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်းဆင်း၊ ပြီးမှ ဟော်လန်က (LLD) ရခဲ့ သူပဲ။ တပ်ထဲ မှာလည်း ပညာတတ် လူတော်မရှိဘူးလို့ ဘယ်ပြောနိုင်မှာလဲ။
လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဟာ ပုံသဏ္ဍာန် (Form) ရှိပေမဲ့ (အနှစ်) (Essence) မှာ အားနည်းနေသေးတယ်လို့
ပြောနိုင်ပါတယ်။ စာရေးသူ အမြင်အရ လက်ရှိပုံသဏ္ဍာန်ကို (Institutionalized) ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုသလို တချိန်တည်းမှာ (အနှစ်) ကို အားရှိအောင် (အားဖြည့်) နိုင်ရပါမယ်။
ကမ္ဘာမှာ လူတွေတကြော်ကြော် အော်နေကြတဲ့ အမေရိကန် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ဥပဒေ (Constitution) က (လွပ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်) ဆိုတဲ့ Freedom of Speech ကို အာမခံပေးတဲ့ First Amendment ပထမတိုးချဲ့
ပြင်ဆင်ချက်မှာ ယနေ့ အမေရိကန်တိုင်းပြည်ကို ဂျောက်ထဲထိုးချနေတဲ့ အခွင့်အရေး တခုဟာလည်း ကပ်ပါ
လာတယ်။ လူတွေ သိပ်သတိမထားမိကြဘူး။ ဒီ အခွင့်အရေးကို ပြင်ဖို့က ခပ်ခက်ခက်။ သူတို့ဆီမှာတောင်
ပြဿနာရှိတာ ဒီမှာလည်း ပြဿနာတွေ ဘယ်ကင်းပါ့မလဲ။ ဒီကိစ္စတွေဟာ အလွန်သိမ်မွေ့ ခက်ခဲတဲ့အရာတွေ မဟုတ်ပါလား။
ယနေ့ အစိုးရသစ်နဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေအကြား ဘော်ဒါစစ်တပ် ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပဋိပက္ခ တိုက်ပွဲ
ပြဿနာကို အဓမ္မလက်နက်နဲ့ ဖြေရှင်းမယ့်အစား ပုံသဏ္ဍာန် အသွင်ကို ပြောင်းလဲပြီး (အနှစ်) ရံလိုက်လျှင် အဖြေရ နိုင်စရာရှိပါတယ်။ စာရေးသူရဲ့ အမြင်အတွေးများကို နောက်အပိုင်းတွေမှာ ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါ့မယ်။
ဘာကြောင့် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေ (Constitution) ဟာ အရေးကြီးတာလဲ
သဘာဝအားဖြင့် လူတွေဟာ ပျက်စီးနိုင်တယ်။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေ ဖုံးလွှမ်းနေတာကြောင့် (အာဏာ) နဲ့
တွေ့ထိတဲ့အခါ မခံနိုင်ဘဲ ပျက်စီးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် (လူ)ကို စံနစ်၊ ဥပဒေနဲ့ ထိန်းရပါတယ်။ နောက် လူတိုင်းရသင့်၊ ခံစားခွင့်တွေကို အားလုံးသိအောင် တဖန် ဥပဒေနဲ့တခါ စာနဲ့ပေနဲ့ မှတ်ကျောက်တင်ပြီး အတိအလင်း
ကြေညာထားရပါတယ်။ ဒီကမှတဆင့် ဥပဒေစိုးမိုးသော Rule of Law စံနစ်ကို ဖေါ်ထုတ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဥပဒေ ပြုစုသူတွေကိုလည်း ဘာတော့ မလုပ်နိုင်ဘူး ဘာတော့လုပ်နိုင်တယ်၊ ဒီဥပဒေတွေကို သုံးပြီး မင်းလုပ် အုပ်ချုပ်သူတွေကိုလည်း ကန့်သတ် ပေးထားရပါမယ်။
တခါ၊ ဒီ (၂) ဦးကြား အငြင်းပွားခဲ့ရင် လွပ်လပ်စွာ ရပ်တည်နိုင်တဲ့ တရားသူကြီးတွေက အဆုံးအဖြတ် ပေးရပါမယ်။ တရားသူကြီးတွေကလည်း မိမိတို့ အဆုံးအဖြတ်နဲ့ ဥပဒေမလုပ်ရပါ။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစံနစ် မှာတော့ (ဥပဒေ) ဆိုတာ
က အုပ်ချုပ်တဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာရှိတာကိုး။ သူကပဲ ပြန်အုပ်ချုပ်တော့ အားလုံးသူ့ကို မော်မကြည့်ရဲကြတော့ ဘူးပေါ့။
တရားသူကြီးဆိုတာတွေကလည်း ဆွဲခန့်တွေ မဟုတ်လာား။ ဒါကြောင့် နဝတ - နအဖ ခေတ်တလျှောက် Rule by
Law စံနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့ ကြတာမဟုတ်လား။ ဒါ ဥပဒေ ကွ ဆိုရင် ဘယ်သူမှ အငြင်းနိုင်တော့။ ဥပဒေကလည်း စစ်ဗိုလ်တွေရဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာ။
လောလောဆယ် စံနစ်သစ်က စစ်အုပ်ချုပ်ရေးထက်တော့ တဆင့်မြင့်လာပြီပေါ့။ အင်စတီကျူးရှင်း (Institution) အဆောက်အအုံလို့ ပြောနိုင်တဲ့ အထက်လွှတ်တော်၊ အောက်လွှတ်တော်၊ တရားရေး၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း အစိုးရတွေ
ပေါ်လာပေမယ့် ပုံသဏ္ဍာန်သာ ပေါ်လာတယ် (အနှစ်) မပါသေးတာကြောင့် (အသက်) မပါသလို ဖြစ်နေသေး တယ်။ မြောက်ကိုရီးယားမှာ လမ်းအကျယ်ကြီးတွေ လူမြင်ကောင်းအောင် ဆောက်ထားပေမယ့် လမ်းပေါ်မှာ ကားတွေမရှိဘဲ စက်ဘီးနဲ့ လမ်းလျှောက်နေတဲ့လူတွေ ဟိုကြဲကြဲ ဒီကြဲကြဲသာရှိတဲ့ ရုပ်ပုံလွှာကို ပြေးမြင်မိတယ်။
၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ စံနစ်ဟာ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲနဲ
အတူ(အနှစ်) ပိုင်းမှာ ချို့တဲ့မှု ရှိပင်ရှိငြား သော်လည်း
ဦးနေဝင်း ရိုက်ချိုးဖျက်စီးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးအဆောက်အအုံ
(Political Institution) တွေ ပြန်ပေါ်လာပါတယ်။ ကျနော်
တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ တိုင်းသူပြည်သား အများစုဟာ စာရေးသူ အမြင်အရ အင်စတီကျူးရှင်း (Institution) နဲ့ ပတ်သက်လာ ရင် အသိမကြွယ် အမြင်မကျယ် ကြသေးဘူးလို့ ခံစားရမိတယ်။
အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့ရဲ့အရေးပါမှုကို (မသိ) ကြပါ။ အနောက်နိုင်ငံတွေ၊ ဂျပန်တို့၊ တိုးတက်တာ ဒီအင်စတီကျူးရှင်း
တွေကြောင့်ပါပဲ။ အင်စတီကျူးရှင်း အတွင်းမှာ နေရာ (position) တွေရှိပါတယ်။ ဒီနေရာ ဒီရာထူးကို ရောက်တဲ့သူ
ဟာ ဒါမလုပ်ရဘူး။ ဒါကိုတော့ မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ် စသည်ဖြင့် လုပ်ထုံး စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေကို အတိအကျ ချမှတ်ထားပြီး (လူ) တွေကို ဘောင်ခတ် ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် (စံနစ်) နဲ့ (စည်းကမ်း) ရှိကြပြီး၊ တိုးတက်မှု ရှိလာကြတယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေကတော့ (အချိန်)ကို လေးစားရမယ်မှန်းတောင် (မသိ) ကြသေး
ဘူး။ ဒါကြောင့် (မြန်မာစံတော်ချိန်) ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းပေါ်လာရတာပေါ့။
ဒီဆောင်းပါးက ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ စံနစ်ကိုရွေးရာမှာ ဖက်ဒရယ်စံနစ်အတွင်း သတိရှိရမယ့် အချက်များ၊ ပြဿနာ
ဖြစ်နိုင်တဲ့ အချက်များကို နောင်တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်ကြရမယ့် လူငယ်၊လူလတ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာမယ့်
လူများ သိသာသတိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ဤဆောင်းပါးကို အတိုက်ခံမျက်စိနှင့် ရေးသည်မဟုတ်ဘဲ မြန်မာပြည်မှာ မွေး၊ မြန်မာပြည်မှာ လူလား မြောက်ခဲ့ရ
သည့် မြန်မာပြည်သား စစ်စစ်မျက်စိနှင့်ရေးခြင်းနှင့် စာရေးသူ၏ အမြင်သက်သက် ဆိုသည်ကို သိစေလိုပါသည်။ (မျှတ) မှုရှိမှ ၊ ရေရှည်ကိုကြည့်ပြီး အဖြေရှာနိုင်မှ (ငြိမ်းချမ်းမှု) ရှိနိုင်ပါမယ်။ ငြိမ်းချမ်းမှုရှိမှ တိုင်းပြည် ထူထောင်နိုင် ပါမယ်။
ဒီလို (အသိ) ရှိဖို့က (အသိစွမ်းအား) လိုပါတယ်။ အသိစွမ်းအားဆိုတာ ခုရေတွင်းတူး အခုရေရသလို မဟုတ်ပါ။
ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြည့်စည်း ယူရတာပါ။ တိုင်းပြည် တပြည်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ ဆိုတာ သိမ်မွေ့ နက်နဲခက်ခဲလှပါတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် အဖြေရှာ ကြရမည့် အနာဂတ် လူငယ်များ အသိစွမ်းအား မြင့်မား ဥာဏ်အမြှော်အမြင် ကြီးကြပါစေဟု ဆုတောင်းရင်း။
အပိုင်း (၃)ကို ဆင်လက် တင်ပြပါမည်
Posted by မောင်မိုး at 14:10
မတူညီသော လောက . .
ဂျပန်နိုင်ငံမှ စူပါကွန်ပျူတာ ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးဖြစ်လာ
လူထုကိုယ်စား၊ လူထုအခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းပေးရမည့် ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတက စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအဖွဲ့များအားေ...
The Irrawaddy Myitsone Dam Built by China
ရွှေဂတ်စ် လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တာဝန်ခံ ကိုဝင်းအောင်နဲ့ ဆက...
Daw Aung San Suu Kyi's Meeting with Quintana
Shwe Gas Movement in London 28-10-09
Daw Aung San Suu Kyi's Meeting with President Thei...
KIA & Myanmar Government Meeting For Peace (Part-2...
KIA & Myanmar Government Meeting For Peace (Part-1...
The lady ရုပ်ရှင်နမူနာ
လက်ပစ်ဗုံး (phone kyaw)
စန္ဒယားလှထွတ် ရေးဖွဲ့သီကုံးပြီး သီရိထံတျာအဖွဲ့ မှ သီဆိုထားသော - မေတ္တာဖြန်းမှလန်းဆန်းမယ် - သီချင်း
မြန်မာတို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကျေးလက်ဓလေ့ကိုဖေါ်ပြသော ချစ်အာရုံ သီးချင်း
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဝန်ကြီးများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ စာနယ်ဇင်းများ တွေ့ဆုံခဲ့
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အလွှာအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူအားလုံး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အားလုံး လက်ခံထ...
ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၃) ရက် ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ အမှတ်တရ
http www.news-eleven.com (1)
website counter, JACKPOT CITY CASINO, spin palace, poker, rouge online casinos